Hurtigruten Expeditions inosvitsa yega Galapagos expedition
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Hurtigruten Expeditions inosvitsa yega Galapagos expedition
Hurtigruten Expeditions vashanyi vachapa zvakanangana nekuchengetedzwa kwemasango ezvisikwa kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEcuador, inonzi UNESCO biosphere reserve muna 2018.
Kubva muna Ndira 2022, Hurtigruten Expeditions ichawedzera hupamhi hwenzvimbo dzekuisanganisira iyo Galapagos Islands
Galapagos yakafambisa vafambi uye masayendisiti kwemazana emakore.
IGalapagos inogara kune anopfuura zviuru zvisere zvemarudzi emhuka dzesango.
Hurtigruten Expeditions iri kuwedzera mupiro wayo wepasirese kune imwe yenzvimbo dzinoyevedza pasi rese: The Galapagos Islands.
Inozivikanwa nekuda kwayo yakasarudzika uye mhuka dzesango, iyo yakasarudzika yezvitsuwa makiromita mazana matanhatu (makiromita chiuru) kubva kumahombekombe eEcuador ine mesmerized vafambi uye masayendisiti kwemazana emakore.
Kubva muna Ndira 2022, Hurtigruten Expeditions ichawedzera hupamhi hwayo nzvimbo kuti isanganise maGalapagos Islands anopa vashanyi vemazuva ano zvakadzama zviitiko zvinotsanangurwa se 'kupfuura kufungidzira'.
"Tinofara zvikuru kuwedzera yedu South America kupa kune imwe yenzvimbo dzinoyevedza pasi pano. Isu takaona yakajeka mamiriro evafambi vachitsvaga chaicho chakasarudzika uye zvine musoro zviitiko zvekufamba, nekuwedzera kwakasimba mukuda kwerudzi rwezvikepe zvidiki / zviitiko zvikuru zvatinopa. Denda rakasimudzira zvakanyanya kusimudzira uku mberi. Pane kudiwa kukuru kwekufambisa izvozvi, uye tiri kupindura nenzvimbo itsva iyi inonakidza, "akadaro CEO weHurigrig Group Group Daniel Skjeldam.
IGalapagos inogara kune dzinopfuura zviuru zvisere zvemarudzi emhuka dzesango, mazhinji acho anongowanikwa kuzvitsuwa zviri kure. Maonero aunofarira ishumba dzegungwa kuEspanola Island muGalapagos.
Nemakambani ese ari maviri achigovana tsika dzakafanana mukudyara mukuchengetedza, Hurtigruten Expeditions cruises kuenda kuGalapagos haina kwayakarerekera kabhoni. Hurtigruten Expeditions vashanyi vachapa zvakanangana nekuchengetedzwa kwemasango ezvisikwa kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEcuador, inonzi UNESCO biosphere reserve muna 2018.
“Galapagos yakagara ichionekwa senzvimbo huru kwazvo dzepanyika. Iyo yemusango, yakasarudzika, yakasiyana, uye yakachengeteka. Sedzimwe nzvimbo dzese, tichave tichishanda pamwe nevanhu vemunharaunda kuona kuti tinoita basa rakanaka mukusimudzira kwenguva refu, "akadaro Lassen.
Cruise dzakakwirira dzinosanganisira kuongorora Giant Tortoise yekuzadza nzvimbo, kuswedera padyo neshumba dzegungwa uye ivhu iguana, kutarisa shiri, kayaking, uye snorkeling, pamwe nehurukuro dzezuva nezuva kuti unzwisise zvirinani zviwi, nhoroondo yavo, uye mhuka huwandu kumusoro uye pasi pegungwa. .
Pakazara, iyo Galapagos inogara kune anopfuura zviuru zvisere zvemarudzi emhuka dzesango, mazhinji acho anongowanikwa kunzvimbo dziri kure dzezvitsuwa.